China API610 OH2 Pump CMD Model mpanamboatra sy mpamatsy | damei kingmech pump
Type CMD paompy dia paompy miompana amin'ny endri-tsoratra farany ambony namboarina noforonina araka ny API 610.
Size: 1-16 santimetatra
Fahafahana: 0-2600 m3 / h
Temperature: -80-450 ° C
Fitaovana: vy vy, SS304, SS316, SS316Ti, SS316L, CD4MCu, Titanium, firaka Titanium, firaka Hastelloy
Ho an'ny paompy madio, somary maloto, hatsiaka, mafana, tsy miandany amin'ny biolojika na media mahery setra.
• Ao amin'ny refineries, indostrian'ny petrochemical, fanodinana arintany ary ny injeniera amin'ny hafanana ambany.
• Amin'ny indostrian'ny simika, indostrian'ny taratasy, indostrian'ny pulp, indostrian'ny siramamy ary indostrian'ny fanodinana ankapobeny.
• Amin'ny indostrian'ny rano, zavamaniry fanamainana rano.
• Amin'ny fanafanana sy ny fifehezana rivotra.
• Orinasa matanjaka.
• Amin'ny injeniera fiarovana ny tontolo iainana.
• Amin'ny indostrian'ny sambo sy any ivelany.
Dingana tokana, marindrano, radial split volute casing pumps miaraka amin'ny tongotra eo afovoany sy ny fidirana radial fidirana tokana, ny fitrohana axial, ny famoahana radial. Miankina amin'ny fepetra miasa lavaka fandanjana hydraulic. Fanaronana fonosana amin'ny fifandraisana mangatsiaka na fanafanana, famehezana ny vatan-kazo amin'ny alàlan'ny fametahana na tombo-kase mekanika amin'ny endriny rehetra (miasa tokana na avo roa heny), fifandraisana amin'ny rano mangatsiaka, fanosehana na famehezana. Ny fantson-drano mifandanja mifanaraka amin'ny drafitra API.
Azo atao ny mangatsiaka ny faladiany lovia fototra. Azo atao ny flanges araky ny DIN na ANSI. Fanerena nomen'ny anarana mitovy ho an'ny flanges mitsoka sy manala.
Làlan'ny fihodinan'ny famantaranandro hita avy any amin'ny farany.
1.A asidra sulphric, asidra azota, asidra hidroklorika, asidra phosoratika ho an'ny asidra organika sy asidra anorganika izay amin'ny hafanana sy ny fepetra isan-karazany.
2.Sodium Hydroxide, sodium carbonate ary alkaly caine amin'ny maripana sy fifantohana isan-karazany.
3.Laha karazana vahaolana sira.
4.Vokatra maro hafa simika petro ranon-javatra, fitambarana organika ary koa akora misy fikafika ary ny vokatra.
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana manohitra ny lozisialy ho an'ny paompy nomen'ny zavamaniry anay dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ilay mpanelanelana voalaza etsy ambony.
Azafady mba omeo ny antsipiriany momba ny serivisy momba ny paompy ho anay, rehefa manafatra ianao.
1.Ny mari-pahaizana momba ny doka sy fikojakojana mifanaraka amin'ny indostrian'ny fizahana dia azo antoka. Fanesorana na fivoriambe haingana. Fanaparitahana tsy misy fanesorana ny asan'ny fantsona sy ny mpamily.
2.Ny frame misy 7 fotsiny ho an'ny habe 48. Hydraulics (impeller) mitovy sy mitondra zana-kazo ho an'ny andian-dahatsoratra maivana na antonony CHZ
Haingam-pandeha ambany ambany, haavo ambany. Noho ny fepetra voalohany fanampiny amin'ny impeller, ny fiainana maharitra maharitra amin'ny casings.
4. Ny fanenjehana dia tsy afaka tapaka. Ny fanarahan-dalàna tsara indrindra amin'ny toe-javatra iasana, ny impeller mihidy miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta, ny ambany NPSHR
5.Ny fanarahan-dalàna farany ambany amin'ny toe-javatra fiasa isan-karazany, ny impeller mihidy miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta, ny ambany NPSHR.
6.Raha ny peratra fanaronam-baravarana sy ny impeller ary ny tombo-kasen'ny vatan-kazo dia azo ampiasaina, ny casing, ny impeller ary ny hazo dia azo ampiasaina.
7.Miorina, mampifanaraka ny toeran'ny zana-kazo, ny hazo goavam-be miaraka amin'ny fiolahana zana-kazo kely, singa vitsivitsy .Vitsy ny fanamarinana mitondra fitakiana .tsy misy asa fantson-drano mangatsiaka
1.Maha azo itokisana ary azo ifanakalozana .Matoha fohy. Sarany fikojakojana ambany
2.Fotoana vitsivitsy, fitazonana tahiry ampahany amin'ny lafiny toekarena, vidin'ny fitazonana tahiry ambany.
3.Famaritana maharitra ny fitaterana antifriction, fiainana lava misy tombo-kase ny hazo, fotoana fohy hanidiana azy, ambany ny vidin'ny fikojakojana ambany, fahombiazan'ny asa ambany.
4. Vidiny ambany ho an'ny fanohanana ny asan'ny fantsona sy ny fiarovana ny feo, ny ampahany kely ary ny vidin'ny fanamboarana, ny fahamendrehana avo lenta.
5.Ny fahamendrehana ambony amin'ny paompy, fotoana fikojakojana ambany, vidin'ny angovo ambany noho ny fisafidianana paompy mitandrina. Vola kely amin'ny fampiasam-bola ho an'ny zavamaniry.
6. Famerenana amin'ny laoniny ny vidin'ny fanamboarana sy ny tahiry ampahany, fotoana fohy fanamboarana.
7. fiainana maharitra amin'ny fonosana na tombo-kase mekanika. Fikatsoana fohy. Fikojakojana mora, vidin'ny fandidiana ambany. Tsy misy vidin'ny fampiasam-bola ho an'ny rafitra mangatsiaka.
Previous: API610 OH1 Model FMD Pump
Manaraka: API610 OH3 Model GDS Pump
Modely API610VS6 Pump TDY
Paompy API610 BB3 (AMD)